COP forum dia manokatra indray ny adihevitra an-dranomasina Scots - Blue Ventures
Ny fanjonoana ambany dia fomba fanao mahazatra amin'ny fisamborana trondro izay ahitana harato mavesatra miampita ny fanambanin'ny ranomasina. Manodidina ny ampahefatry ny hazan-dranomasina eran-tany no azo amin'izany fomba izany, miaraka amin'ny sambo mivezivezy manodidina ny 19 tapitrisa taonina isan-taona, mihoatra noho ny fomba hafa rehetra. Ny antsanga sy ny toeram-ponenany any ambanin'ny ranomasina no zezika karbônina lehibe indrindra eran-tany, ary ny fikorontanan'ny harato dia heverina fa manampy amin'ny krizin'ny toetrandro, mamoaka CO1.5 hatramin'ny 2 miliara taonina isan-taona.
Talohan'ny COP26, miaraka amin'ny Transform Bottom Trawling Coalition, dia namoaka lahateny vaovao mamintina ity sehatra fikarohana vao misondrotra ity izahay, manoritra ny fiantraikany lehibe fantatra avy amin'ny trawling ambany amin'ny famoahana entona mandatsa-dranomaso sy ny famantarana ny fahafahana manalefaka.
Niara-niasa tamin'ny Coalition and Our Seas izahay mba hampiantrano hetsika saribakoly ao Glasgow mikaroka ny 'Fomba trawling sy ho avy tsy misy karbona: inona no tokony hovaina?'.
Ireo mpanjono an-dranomasina Scottish nandray anjara tamin'ny hetsika tontonana natao tao amin'ny COP26 dia nampiasa ny fivoriana mba hanamafisana ny antso amin'ny fananganana faritra amorontsiraka 0-3nm any Scotland natokana ho an'ny fitaovam-pitaterana ambany fiatraikany.
Vakio ny lahatsoratra feno momba ity antso ho amin'ny asa ity Eto.
trawling ambany, fiaraha-mitantana, COP26, fetra an-dranomasina, Ny ranomasinay, Manova trondro ambany, trawling